Ernest Hemingway. Makore 119 ekuzvarwa kwake. Zvimedu zvemabasa ake | Zvazvino Zvinyorwa
Ernest Hemingway. Makore 119 ekuzvarwa kwake. Zvimedu zvemabasa ake
De Ernest Hemingway inoenderera uye icharamba ichitaurwa kuti ndiyo imwe yeakanyanya vanyori vanotaura nyaya vezana ramakumi maviri emakore mabhuku epasi rose. Yehupenyu hwakasimba sekuguma kunosuruvarisa, zvaive Mubayiro weNobel muna 1954. Nhasi ndingadai ndakazadzisa 119 makore.
Uye kana tisina kuverenga, zvirokwazvo taona mamwe e (mazhinji) mafirimu anoenderana izvo zvakaitwa nemabasa ake se Chembere negungwa (Ndiri kugara naSpencer Tracy), Kune avo Bhero Rinobhadhara o Sarai pfuti (zvese naGary Cooper). Saka kuti ndizviyeuchidze, ndinotora mashoma zvidimbu ake anomiririra mabasa.
1 Makomo akasvibira eAfrica
2 Chembere negungwa
3 Kune avo Bhero Rinobhadhara
4 Paris yaive pati
5 Kuve uye kwete kuva nazvo
7 Sarai pfuti
Makomo akasvibira eAfrica
Kondinendi inokura nekukasira kana isu tangopinda nechisimba, uye nepo zvizvarwa zvichirarama zvinoenderana nazvo, vatorwa vanozviparadza; vanotema miti, vanomesa mvura uye vanouraya mhuka. Uye ivhu rinoneta kushandiswa, nekuti pasi nevagari vayo vakaitwa kuti vasiirwe sezvatakavawana.
Harahwa yakanga yakaonda uye iri chikwata, nemitsara yakadzika kuseri kwemutsipa wayo. Mavara machena ecancer benign yeganda iro zuva rinoburitsa pamwe nekuratidzira kwaro mugungwa rinopisa raive pamatama ake. Mavanga iwayo akamhanya achidzika nemativi echiso chake kwese kuzasi, uye maoko ake akatakura mavanga akadzika anokonzerwa nekubata tambo kana akabata hove huru.
Kana mukuru akatsika padyo, achitevera makwara akasiiwa nemabhiza ebhendi, aipfuura mukati memayadhi makumi maviri kubva paive naRobert. At that distance paive pasina kana problem. Mukuru uyu aive Lieutenant Pronghorn. Akange asvika achibva kuLa Granja, achiita mirairo yekusvika kumupata, mushure mekugamuchira chiziviso chekurwiswa kweposvo pazasi. Vakanga vamhanya nekumhanya kuzere, ndokuzo dzosera nhanho dzavo pavakasvika pazambuko rakakwidzwa, kuyambuka rwizi panzvimbo yepamusoro vodzika nepakati pemasango. Mabhiza aya akange achidikitira uye akabvaruka, uye aifanirwa kuitwa kuti atsike.
Paris yaive pati
Pandakamuka ndikatarisa pahwindo rakavhurika ndikaona mwenje wemwedzi uri pamatenga edzimba dzakareba, pakanga paine kunzwa. Ndakavanza kumeso kwangu mumumvuri, ndichinzvenga mwedzi, asi handina kugona kurara uye ndakaramba ndichichinjisa manzwiro iwayo. Tese takamuka kaviri husiku ihwohwo, asi pakupedzisira mukadzi wangu akarara zvinotapira, nechiedza chemwedzi pachiso chake. Ndakada kufunga nezvese izvi, asi ndakakatyamadzwa. Zvakareruka zvekuti hupenyu hwainge hwaratidzika kwandiri mangwanani iwayo, pandakamuka ndikaona chitubu chenhema, ndikanzwa nyere yemurume wembudzi, ndikabuda kunotenga bepanhau rebhiza.
Kuve uye kwete kuva nazvo
Simuka. Yakanga yakajeka masikati machena, yainakidza, yakanga isiri kutonhora uye mhepo yekuchamhembe yakapeperesa. Mhepo yakanga yava kubuda. Kumucheto kwemukoto kwaive nemapeniki maviri akagara pamurwi. Chikepe chehove, chakapendwa nerima girini, chakapfuura musika. Akagara padanda aive mubati wehove mutema. Pamusoro pemvura, inotsvedzerera nemhepo yakanangana nedutu, bhuruu-grey masikati masikati. Harry akatarisa chitsuwa chejecha chakaumbwa pavakaburitsa mugero pakanga pawanika batira rehaki. Nyeredzi chena dzaibhururuka pamusoro pechitsuwa.
Akanga ave kuwana chimwe chinhu pasina. Izvi zvakashanda kunonotsa kuiswa kweinvoice. Asi iwo marudzi emabhiri anogara achibhadharwa. Icho chimwe chezvinhu zvakaisvonaka izvo zvaunofanira kugara uchivimba nazvo… Ndakafunga kuti ndakanga ndabhadhara zvese panguva imwe chete, ndisina zano remubayiro uye chirango. Kungochinjana kwemaitiro. Mumwe akapa chimwe chinhu uye mumwe akagamuchira chimwe chinhu nekudzoka. Kana kuti akashandira chimwe chinhu. Mune imwe nzira kana imwe, iwe unogara uchifanira kubhadhara kune zvese zvine kukosha ... Pamwe iwe unobhadhara nekudzidza kubva kuzvinhu, kana neruzivo, kana kugamuchira njodzi, kana nemari. Nyika inzvimbo yakanaka yekuenda kunotenga ...
Mukoti akapinda mumba ndokuvhara gonhi. Ndakagara pasi mucorridor. Ndakanzwa ndisina chinhu. Ini ndanga ndisingafunge, ndaisakwanisa kufunga. Ndakaziva kuti aizofa uye ndakanamata kuti asafe. Usamurega afe. Ah Mwari wangu, ndinokukumbirisa, usamurega afe. Ini ndichaita chero chaunoda iwe ukasamurega afa. Ndinokumbira, ndinokumbira, ndinokumbira. Mwari wangu, musamurega achifa ... Mwari wangu, musamurega afe ... Ndiri kukutetererai, ndinokumbirisa, ndinokumbirisa, musarega achifa .. Mwari wangu, ndinokumbirisa kuti usafe ... ndichaita zvese zvaunoda kana ukasamurega kuti afe ... Mwana afa, asi usamurege afe. Wanga uchitaura chokwadi, asi usamurege afe… ndinokumbira, Mwari wangu, musamurega afe… ».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Ernest Hemingway. Makore 119 ekuzvarwa kwake. Zvimedu zvemabasa ake
AJ Cronin. Chirangaridzo cheuyu chiremba weScotland uye munyori